Kwu okwu n'asụsụ ndị na-ege gị ntị | Martech Zone
Fraịde, Ọktọba 1, 2010 Fraịde, Ọktọba 1, 2010 Douglas Karr
O bu ihe kwesiri ekwesi na m dee ihe banyere nkwurita okwu na ime ulo nzuko na France. N'abalị ụnyaahụ anyị riri nri abalị maka 8 elekere asatọ na ụlọ ọrụ na Le Procope, ụlọ oriri na ọ oldestụ oldestụ kasị ochie na Paris (est 1686). Anyị nwere obi ụtọ - ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ a nwere ndị nlekọta dịka Danton, Voltaire, John Paul Jones, Benjamin Franklin na Thomas Jefferson.
Anyi enweela ihe isi ike na ị nweta cabs ebe a na Paris (ọ bụghị ihe omimi). Ndị tagzi na-abịa ma na-aga na mma ha. Anyị chere maka ọkara otu awa ma ọ bụ karịa na nkwari akụ ahụ na onye nlekọta ọgbakọ ahụ gwara anyị ka anyị gaa na tagzi na-eguzo n'akụkụ nkuku. Gburugburu akuku dị na France dị ogologo karịa n'akụkụ nkuku na United States. Anyị jere ije ihe dị ka ọkara kilomita site n'okporo ụzọ ahụ ruo n'okporo ụzọ nwere ebe a na-akwụ tagzi. N'ebe ahụ ka anyị guzo minutes nkeji iri anọ na ise. N'oge a anyị abịala n'oge maka nri abalị ma anyị agabeghị!
Tagzi anyị mechara pụta, otu obere nwanyị nwanyị French mara mma nọ na wiil ahụ. O jiri nkwanye ugwu jụọ ebe anyị na-aga… “Le Procope” anyị zara. Na French ọ rịọrọ maka adreesị ahụ. Ezigalarị m adreesị ahụ na ekwentị m mana anaghị eme ya ka m wee ghara ijide n'aka - ọzọ karịa na ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ ahụ nọ n'okpuru ndị Louvre. Nkeji ise sochirinụ, ejiri mkpụrụ obi were okwu ọnụ nke m anụbeghị kemgbe mama m tiri ha mkpu (ọ bụ Quebecois) dịka nwatakịrị. Onye na-anya tagzi na-eti mkpu site na nghọta dị otú a, enwere m ike ịtụgharị…. “A ọtụtụ ụlọ oriri na ọ restaurantsụ restaurantsụ na Paris”…. “Ọ kwesịrị ka ha niile buru ha n’isi”…. Mụ na Bill (onye mụ na ya na-azụkọ ahịa) nọdụrụ ala ka anyị kpudoro isi anyị, na-achọ imechi akara ikuku na adres anyị.
N’ịbụ onye ike gwụrụ, ajụrụ m Bill maka adres ya. Ọ na-echeta ihe niile… ọ ga-echeta nke a. Bill lere m anya na-agbasaghị m ma malite ikwughachi ihe o chere na adres to a na French. “Gịnị mere i ji eji French agwa m? Sịpepụta ya !!!! Ọ na-asụ ụda olu French ya… Aga m egbu ya. Site na nke a, anyị dị ka Abbott na Costello na-akụda anyị aka site na onye ọkwọ ụgbọ ala French na-ewe iwe nke ihe dị ka ọkara ka anyị.
Onye tagzi anyị pụrụ! Ọ na-agba ọsọ ọsọ… na iti mkpu n'ụgbọala ma ọ bụ onye ọ bụla na-eje ije nke nwara ịnabata n'ụzọ ya. Etisịm ini emi ikodụkde ufọt ufọt Paris, ami ye Bill ikekemeke ndisak. Enwetara m okwu ya karịa sick "isi na-arịa ya"… "rie ya!" ka anyị na-abanye ma na-apụ site na okporo ụzọ.
N’ikpeazụ, anyị rutere n’etiti Paris.
Onye ọkwọ ụgbọ ala anyị amaghị n'okporo ámá (ọ chọrọ okporo ụzọ), ya mere ọ hapụrụ anyị ka ọ gwa anyị ka anyị chọọ ya. N'oge a, anyị nwere ekele dị ukwuu na obodo, nchekwa, na ọbụnadị ịchị ọchị nyere usoro mmụta ndị anyị ka hụrụ. Agwara m ya na m hụrụ ya n'anya na French, ọ fụrụ m nsusu ọnụ… anyị nọ n'ụzọ.
Ma ọ bụ ya mere anyị chere.
Anyị gara gburugburu na gburugburu ogbe ndịda maka elekere na-esote ma ọ bụ karịa… ugbu a ọ ga-abụ elekere abụọ maka nri abalị. N'oge a, anyị nwere olile anya na ụlọ ọrụ anyị malitere iri nri na-enweghị anyị ma anyị kpebiri ịtụba akwa ahụ ma were nri abalị n'onwe anyị. Nke ahụ bụ mgbe anyị gafere Tex Mex Indiana restaurantlọ oriri na ọ…ụ…… Mụ na Bill ga-ese foto.
Anyị na-agbakọta akụkụ na ebe ahụ tupu anyị abịa Le Procope na ebube ya niile. Anyị banyere n’ime ụlọ ngwa ngwa, onye na-elekọta anyị gwara anyị na ụlọ ọrụ anyị ka dị! Anyị na-akọrọ ọtụtụ ọchị mgbe anyị na-akọghachi ihe ndị mere na mgbede. Nri anyasị dị ịtụnanya, anyị metakwara ndị enyi ọhụrụ.
Enwere ụfọdụ nkuzi mụtara, n'agbanyeghị:
Iji soro ndị na-ege gị ntị kwurịta okwu nke ọma, ị ghaghị asụ asụsụ ha.
Iji soro ndị na-ege gị ntị kwurịta okwu nke ọma, ị ghaghị ghọtakwa omenala ha.
Iji ruo ebe ị na-aga, ịkwesịrị mara kpọmkwem ebe nke ahụ bụ - yana nkọwa dị ka o kwere mee.
Adala mbà! O nwere ike were gị ihe karịrị otu ụzọ iji ruo ebe ahụ.
Ndụmọdụ a gafere French na Bekee ma ọ bụ France na Indiana. Ọ bụ otu anyị kwesịrị isi lee ahịa anya. Ka anyị wee nwee ike ikwurita okwu nke ọma, ọ dị anyị mkpa ịmata kpọmkwem ebe ahịa anyị dị, ebe anyị chọrọ ka ha nọrọ, jiri usoro iji kpalie ha nke ọma nye ha, ma kwuo n'asụsụ ha - ọ bụghị nke anyị. Ma ọ bụrụ na ị jikọghị ụzọ mbụ, ịnwere ike ịnwale ụzọ ndị ọzọ iji mee ka ozi gị gafere.
Ọ bụrụ na ị na-eche… anyị were ụzọ ụgbọ oloko laghachi na họtel. 🙂
Tags: ahịa profaịlụọmụmụ ahịa ahịa dijitalụfinch ụdịIBM Smarter Azụmaahịanyocha ahịanyocha ahịagbakwunye
Bido Oge Izu-nginggbanwe Onewa Otu Obodo N’otu Oge
Ọkt 2, 2010 na 9:58 AM
"Ebe ị nwere ọnụ ụlọ ọgbakọ, ị ga-emepụta otu." - Voltaire Finn.